MW CMC Oo Hadh-galay Birqod - Cakaara News
MW CMC Oo Hadh-galay Birqod
Birqod(CN) Arbaco, 6da January 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hogaaminaya wafti balaadhan oo ay kamid yihiin afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, waftigii kasocday wadanka Kenya iyo mas’uuliyiin kale ayaa saaka u baqoolay dhanka degmada birqod ee gobolka jarar.
Madaxwaynaha iyo waftiga oo intii socdaalka lagu jiray shacabkii kusoo dhawaynayay degmooyinka iyo tuulooyinka lakulmayay kuna xog waraysanayay ayaa amin duhurkii ah hadh-galay degmada Birqod iyagoo booqasho indha indhayn ah kusoo maray mashruuca biyo-xidheenka kasocda qabalaha Hoodaale ee degmada dhagaxbuur.
Nasasho gaaban oo qado birqod ah kadibna, waxay madaxwaynaha iyo waftigiisu ukala ambabaxeen laba meelood.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo hogaaminayo wafti kakooban heer deegaan, heer gobol iyo heer degmo ayaa booqasho u aaday mashruuc biyo-xidheen ah oo kasocday tuulada Hiillay ee birqod hoos timaada meesha afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq oo horkacaya waftigii kasocday Kenya ay usii socdaaleen dhanka gobolka qorraxey iyagoo kuwajahan magaalada godey.
Ugudanbayna, madaxwaynaha iyo heerarka kaladuwan ee waftigiisa ayaa caawa u dheelman doona birqod.